सूचना प्रविधि – Page4– Science Infotech
काठमाडौं, भदौं १९ ।
नेपालका लागि सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक ब्रिकेता आइएमएसले दसैं अफर भन्दै मोबाइलको मूल्य घटाएको छ। ८६,९०० पर्ने ग्यालेक्सी नोट फाइभमा १०,००० घटाएको छ। अब ७६,९०० सयमा सो मोबाइल किन्न सकिन्छ।
त्यस्तै सामसुङ एस सेभेन एज र एस सेभेनमा १२,००० हजार क्यास ब्याकको अफर उसले ल्याएको छ। ५०,९०० सय पर्ने ग्यालेक्सी ए सेभेन सिक्समा ५,००० घटेको छ भने ग्यालेक्सी ए फाइभमा ५००० रुपैयाँ घटेको छ। अब ग्यालेक्सी ए सेभेन सिक्स अब ४५,९०० र ए फाइभ ३७,९०० मा किन्न पाइन्छ।
ग्यालेक्सी जे सेभेनमा १५०० घटाइएको छ। २७,९९० पर्ने सो मोबाइल २६,४९० मा किन्न सकिन्छ। त्यस्तै ग्यालेक्सी जे फाइमा २,००० घटाइएको छ, अब सो मोबाइलको मूल्य २३४९० पर्छ । जे २ सिक्स को भने मुल्य घटाइएको छैन्।
यो १५,९०० सयमा किन्न पाइन्छ। त्यस्तै २२,९ ०० पर्ने ग्यालेक्सी जे सेभेन अब २१,९०० मा किन्न सकिन्छ । जे फाइभको मूल्य १९,९०० तोकिएको छ । १२,९०० पर्ने जेटु अब ११,९०० मा पाइन्छ।
भाद्र १६, २०७३ ।
नेपाल टेलिकमले ‘फेस्टिवल अफर’का रुपमा जिएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि शुभरात्रि प्याकेज ल्याउने भएको छ ।
यही भदौ १८ गतेदेखि आगामी असोज १ गतेसम्म लागू हुने अफर राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उपभोक्ताले रु ४० मा पाँच सय एमबी सात दिनका लागि र रु ८५ मा एक हजार दुई सय एमबी १५ दिनका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । पाँच एमबी डाटा लिन स्पेसियल ५०० एमबी (अङ्ग्रेजीमा) र एक हजार दुई सय एमबी डाटा लिन स्पेसियल १२०० एमबी(अङ्ग्रेजीमा) लेखेर १४१५ मा एसएमएस पठाउनुपर्नेछ । रासस
स्याटलाइटको जिम्मा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई
भाद्र ६, २०७३।
सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट) राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सुम्पेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई कार्यादेशसहित स्याटलाइटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन जिम्मेवारी सुम्पेको हो । मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नेपालले अन्तरिक्षमा पाएको स्थान (अर्बिटल स्लट) उपयुक्त भए नभएको अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिएको छ ।
यसैगरी अर्बिटल स्लटबारे अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) सँग छलफल तथा सहकार्य अघि बढाउन, नेपाल आफैंले स्याटलाइट राख्न सक्ने नसक्ने निक्र्यौल गर्न र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएमा प्रस्ताव बनाउन प्राधिकरणले कार्यादेश पाएको छ । यस्तो प्रस्ताव बनाउँदा मन्त्रालयका एक जना प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराउनुपर्ने छ । यी कार्य अघि बढाउन प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आशयपत्र माग गर्ने अधिकारसमेत पाएको छ ।
यसअघि स्याटलाइटसम्बन्धी काम मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयले पटक–पटक अध्ययन गराउनुका साथै आईटीयूसँग सहकार्य गरिरहेको थियो । तर, गत वर्ष प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा स्याटलाइट राख्ने विषयमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । योजनाअनुसार प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीसँग आशयपत्र माग गर्‍यो । प्राधिकरणले त्यस बेला ५ वटा कम्पनीलाई छोटो सूची (सर्ट लिस्ट) मा समेत राखेको थियो ।
आईटीयूले नेपालका लागि सन् १९८४ मै अर्बिटल स्लट छुट्टयाइदिएको थियो । नेपालका लागि आईटीयूले ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरका दुइटा स्लट छुट्याइदिएको छ । नेपालले सन् २०१५ भित्रै स्लट प्रयोग गरिसक्नुपर्ने थियो । स्याटलाइट राख्ने विषयमा नेपालले कुनै तयारी नगर्दा आईटीयूले दिएको समय त्यत्तिकै गुज्रेको छ ।
आईटीयूले दिएको समयवाधि सकिने मिति नजिकिँदै जाँदा सरकारले गठन गरेका दुइटा छुट्टाछुट्टै अध्ययन समितिले आईटीयूले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ‘अर्बिटल स्लट’ मा स्याटलाइट राख्न उपयुक्त नभएको सुझाव दिएका थिए । नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
आईटीयूले दिएकै स्थानमा स्याटलाइट राख्दा त्यसको ‘फुटप्रिन्ट’ नेपालमाभन्दा अन्य मुलुकमा पर्ने प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन् । दुवै समितिले आईटीयूले उपयुक्त स्थानमा ‘अर्बिटल स्लट’ माग्न सकिने सुविधा दिएकाले माग गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । नेपालले स्याटलाइट राख्नका लागि सुरुमै करिब ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अध्ययनले देखिएको छ । स्याटलाइट राखिसकेपछि पनि १५ वर्षभित्र अर्को ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
आईटीयूले उपलब्ध गराएको स्थानमा भूमध्यरेखाबाट ३७ हजार किलोमिटर उचाइमा गुरुत्वाकर्षणले नभेट्ने स्थानमा स्याटलाइट राख्नुपर्छ । स्याटलाइट राखिसकेपछि यसको मर्मत लगायतका खर्च धेरै हुने प्राविधिकहरू बताउँछन् । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङ लगातका लागि स्याटलाइट प्रयोग हुने गर्छ । यसबाट वितरित ब्यान्डविथमा ताररहित सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ ।
नेपालमा विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनी, टेलिभिजन र डिटिएच कम्पनीले विदेशी स्याटलाइटमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । प्रतिवर्ष नेपालबाट करिब चार अर्ब रुपैयाँ स्याटलाइटका लागि बाहिरिएको सञ्चार मन्त्रालयले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । नेपाली कम्पनीले हाल भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङलगायत मुलुकका कम्पनीबाट स्याटलाइट सेवा लिँदै आएका छन् ।
१६ चैत, काठमाडौं ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)द्वारा आयोजित सातौं राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन काठमाडौमा आजदेखि शुरु भएको छ । काठमाडौंको याक एन्ड यती होटलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनको उदघाटन गर्नुभयो । यस पटकको सम्मेलनको मूल नारा Science, Technology and Innovation for Nepal’s’ Graduation to Developing Country Status भन्ने रहेको नाष्टले जनाएको छ ।
तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, चीन सहित विभिन्न १० मुलुकका करिब १००० वैज्ञानिकहरूको सहभागिता रहनेछ भने ५६ वटा प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरी ६०८ वटा वैज्ञानिक/प्राविधिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने नाष्टका उपकुलपति प्रा. डा. जीवराज पोखरेलले जानकारी दिए । प्राविधिक सत्रहरु भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रविधिमा केन्द्रीत हुने बताए ।
सम्मेलनमा भारतको जवाहरलाल नेहरु सेन्टर फर एड्भान्स्ड रिसर्चका वैज्ञानिक प्रा. डा. सीएनआर राओ र चीनको चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेजका अध्यक्ष प्रा. डा. बाइ चुन्ली पनि सहभागी छन् । उनीहरुले मुलुकको विकासमा विज्ञान प्रविधिको भूमिका विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । नाष्टले २०४५ सालयता हरेक चार वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन गर्दै आएको छ ।
Posted on April 5, 2015 September 25, 2017
फेसबुक अहिले विश्वमै सबैभन्दा धेरै मानिसहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल हो । फेसबुकमा सन २०१० जुलाईसम्म झन्‍डै ५०,००,००,००० जनाले एकाउन्‍ट खोलिसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुले मानिसको जीवन जती नै सहज बनाएको छ यसको गलत प्रयोगले समस्या पनि निम्त्याएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको चर्चासँगै यसको प्रायोग दैनिक हुने गर्छ । कतिलाई त फेसबुकबीनाको जीवनको अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुने स्थिति आउन लागिसकेको छ । फेसबुक बन्द भएमा ‘आफु पनि बन्द हुने’ बताउने व्यक्तिहरु पनि सर्वत्र छन् । सामान्य रूपमा यसमा रमाउनु त ठीकै हो, तर यसैमा ‘क्रेजी’ हुनु चाहिँ खासै राम्रो होइन । त्यसो त अभिन्न अङ्ग भइसकेको फेसबुकबाट राम्रा कुराहरु पनि धेरै नै ग्रहण गर्न सकिन्छ, विश्वमा भएका गतिविधिबारे थाहा पाउन सकिन्छ ।
वर्तमानमा मानिसहरुले फेसबुकको फरकफरक प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । फेसबूकले जीवनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न थालेको छ । हिजोआज कुनै कम्पनी वा कार्यालयले कसैलाई जागिरमा राख्नुभन्दा पहिले उनको फेसबुक अकाउन्ट जाँच गर्ने गरिन्छ । आफ्नो प्रोफाइल फोटो साधारण र शिष्ट राख्नुहोस् । आफूलाई मन परेको पुस्तक, फिल्म, रुची उल्लेख पेजमा लाइक गर्नुहोस्, यसबाट तपाईंको सोंच देखिन्छ । ओजनदार स्टाटस तथा म्यासेज शेयर गर्नुहोस् । शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नुहोस् ।
केहीले आफुलाई मन पर्ने व्यक्तिलाई राम्रो प्रभाव पार्न तथा सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि पनि फेसबुकका स्टाटस मन पराइदिने, राम्रा ‘कमेन्ट’ लेखिदिने धेरै नै छन् । त्यसो त आफ्नो लगातारको कामबाट आराम पाउन केहीछिनको लागि फेसबुक खोली मनमा लागेका कुरा निर्धक्क खोल्ने व्यक्तिहरु पनि कम छैनन् । अनि आफ्नो स्टाटस सबैले हेरून् र आफुलाई एकपटक एस्सो सम्झिऊन् अनि सो मा कमेण्ट लेखून् भन्ने सोचका साथ फेसबुक चलाउने पनि धेरै छन् । आफ्नो स्टाटसमा कसैले पनि कमेण्ट नलेख्दा भने चित्त दुखाउने पनि धेरै नै छन् । फेसबुकमार्फत आफुलाई उपयुक्त नलागेको कुरामा विरोध जनाउने व्यक्तिहरु पनि धेरै नै छन् । कोही कोही मानिसले त फेसबुकमा चिया पिएको, मादक प्रदार्थ पिएको, खाना खाएको जस्ता कमसल खालका तस्बिर पोस्ट गर्ने गर्नु भनेको हल्का खालको औकात देखाउनु मात्र हो । भावनात्मक भएर एक दिन मै धेरै स्टाटस पोस्ट गर्नु राम्रो होईन ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरले चालेको महत्वपूर्ण सामाजिक सञ्जालको फेसबुकमा आफ्नो एकाउन्ट खोल्ने, देशविदेशका साथीहरु बनाउने, उनीहरुको खानपान, लवाई, खवाईको सिको गर्ने, आफ्नो घरमा बसेर फेसबुकको माध्यमद्वारा विभिन्न राष्ट्रको सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधिहरुको अवलोकन गर्ने आज आम नेपालीको दैनिक क्रियाकलाप भइसकेको छ । समयसंगै नेपालीहरु पनि धेरैले फेसबुकमा आफ्नो ‘एकाउण्ट’ खोलिसकेका छन् । फेसबुकका प्रयोगकर्ताको भिडमा राजनीतिज्ञ तथा सेलिब्रेटीहरु पनि धेरै नै छन् । उनीहरु पनि नयाँ साथी बनाउन अनि ‘स्टाटस म्यासेज’ लेख्न उत्तिकै सक्रिय रहेको पाउन सकिन्छ । देशको राजनीतिक परिस्थितिका सन्दर्भमा सुचना आदनप्रदान गर्ने तथा फेसबुककै माध्यमबाट ‘आन्दोलन’ गर्ने गरेको पनि धेरैको फेसबुक ‘प्रोफाइल’बाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
प्रयोगकर्ताहरूले बडिमा ५००० जना साथि आफ्नो खातामा जोडन सक्छन् । फेसबुकमा पेज बनाइ ब्यापारको प्रबर्धन पनि गर्ने सकिन्छ भने चर्चित ब्यक्तित्वहरूले पेज मार्फत आफ्ना प्रशंसकहरू सङ्ग अन्तरक्रिया गर्ने पनि सक्दछ। फेसबुकमा अहिले च्याट,भिडियो च्याट,सामुहिक च्याट र गित सुन्ने जस्ता सुबिधाहरू थप गरिएको छ । तर, फेसबुक प्रयोग गर्नका लागि प्रयोगकर्ता कम्‍तिमा १३ बर्षको उमेर भएको हुनु पर्दछ र, इमेलबाट एकाउन्‍टलाइ सक्रिय बनाइने भएकाले प्रयोगकर्तासंग नीजि इमेल हुनु पर्दछ । फेसबुकमा चलाउन मनलागेन भने निस्कृय बनाउन पनि सकिन्छ । खाता निस्कृय बनाइसके पछि तत्कालका लागी फेसबुक खातामा कसैले कमेन्ट ,लाइक र लेख्न सक्दैन् तर स्थाइरूपमा भने खाता डिलिट भएको हुदैन र पछि सक्रिय बनाइसके पछि सबै सुचनाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।फेसबुकको मुख्य बिवादको कुरा यस्को गोपनियताको रहेको छ । यो वेभसाइटको नामको जरो भने बिश्वबिध्यालयले विद्यार्थीहरूलाई एक अर्कालाई चिन्न सहयोग पुर‍‌याउने उद्देश्यले तयार पारिएको पुस्तकको नामबाट आएको हो ,जुन नयाँ सत्र सुरु हुने बेला सबैलाई दिइन्थ्यो ।
सन् २००४ मा मार्क जुकरबर्गले हावर्ड बिश्वबिध्यालयमा हुँदा उनका कलेज कोठामासँगै बस्ने साथीहरू केही कम्प्युटर विज्ञानका विद्यार्थीहरू एडवार्डो साभरिन, डस्टिन मोस कविट्ज रक्रिस ह्यूजेसको साथ फेसबुकको स्थापना गरेका हुन् । वेबसाइट सुरुमा हावर्ड बिश्वबिध्यालयका बिध्यार्थीहरू माझ मात्र सिमित रहे पनि पछि बोस्टन क्षेत्रको आइवी लीग र स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयमा पनि फैलाइएको थियो ।
फेसबुकमा झन्‍डै ५०,००,००,००० जनाले एकाउन्‍ट खोलिसकेका छन् । सन जनवरि २००९मा Complete.com ले गरेको सर्वेक्षणमा फेसबुक विश्‍वकै बढि प्रयोग हुने सामाजिक सञ्‍जालको रूपमा राखेको छ। com Score को अप्रिल २००८ को प्रतिवेदन अनुसार फेसबुक सबैभन्‍दा बढि चलाइने वेभसाइटको रूपमा लिइएको छ। Alexa का अनुसार यो विश्‍वको दिस्रो बढि चलाउने सख्‍यामा छ। फेसबुकलाइ सन २००७मा PC Magazine को “Top १०० Classic Websites” (उत्‍कृष्‍ट १०० वेभसाटटहरू)मा सामेल गरिएको थियो र सन २००८ मा वेबी अवार्ड्सले दिएको “People’s Voice Award” समेत पायो । सन २००६मा विद्यार्थीहरू माझ गरिएको अध्‍ययनमा फेसबुक चलाउनेको सख्‍या धेरै मात्रामा पाइएको थियो ।
सन २०१० नोभेम्‍बर १५का दिन फेसबुकले ‘फेसबुक मेसेज’ सुविद्या लाउने कुरा सार्वजनिक गरेको छ। फेसबुकका सि.इ.ओ मार्क जुकरबर्गले एक पत्रकार सम्‍मेलनका समाहोरमा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू @facebook.com राखेर इमेल खोल्‍न सक्‍ने बताएका छन्। कतिले भने ‘फेसबुक मेसेज’ लाई ‘जि-मेल किलर’को संज्ञा समेत दिएका छन्। ‘प्रोजेक्‍ट टाइटान’को कोडनाममा बनाइरहिएको ‘फेसबुक मेसेज’ लाई पूर्णरूपमा बन्‍नको रूपमा भने १५ महिना लाग्‍ने बताइएको छ।
फेसबुकमा पैगंबर मोहम्मदको आपत्तिजनक कार्टून तस्‍बिर बनाउने प्रतियोगितामा इस्‍लामी धार्मिक भावनामा ठेस पुगेकाले यसलाइ पाकिस्‍ितानमा एकताका प्रतिबन्‍ध लगाइएको थियो। पछि ३१ मे, २०१०मा यस सम्‍बन्‍धिको पृष्‍ठ र ब्‍लगलाइ प्रतिबन्‍ध लगाइएको छ। स्रोतहरूका अनुसार यसलाइ पाकिस्‍तान अझै कति धेरै ठाउहरूमा प्रतिबन्‍ध लगाइको पाइएको छ। फेसबुकलाइ चीन, भेतनाम, इरान, साउदी अरविया, बंगलादेश, सिर्या, यजेकिस्‍तानका धेरै क्षेत्रहरूमा सेनसरसिप लगाइएको छ। त्‍यस्‍तै, विभिन्‍न सङ्घ संस्‍थाहरूमा आफ्‍ना कमदारहरू केवल काममा मात्रै एककृत होउन भनेर आफ्‍नो नेटवर्कमा सेनसरसिप लगाइएको छ।मलाई मन पर्ने सञजल
‘म’ को धाक नदिनोस्
अंग्रेजी शब्दहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानले ‘आई’ र ‘मी’ (म र मेरो) को सट्टा यू (तिमी वा तपाईं) शब्द बढी लोकप्रिय देखाएको छ। त्यसैगरी ‘हि’ र ‘सि’ पनि बढी लोकप्रिय देखिएको छ। त्यसैले ‘म’ को धाक नदिनोस्।
घटना देख्नुभो ? तत्काल अपडेट गर्नोस्
स्रोत र सभार :
Posted on April 4, 2015 January 30, 2017
Posted on March 29, 2015 July 24, 2017
Posted on March 29, 2015 January 30, 2017
प्रविधिमा सबै वर्गको पहुँच वृद्धि गर्न भोलिदेखि राजधानीमा राष्ट्रिय सम्मेलन
चैत्र १५, काठमाडौं । प्रविधिमा सबै वर्गको पहुँच वृद्धि गर्न भोलिदेखि राजधानीमा राष्ट्रिय सम्मेलन ! प्रविधि व्यावहारिक तथा औद्योगिक कलाहरू र प्रयुक्त विज्ञानसित सम्बन्धित अध्ययन हो। आदि कालदेखि नैं मानवले प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको हो। आधुनिक सभ्यतालाई विकास गरी आजको स्थितिमा ल्याउन प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ।
द्रूत गतिमा विकास भइरहेको प्रविधिमा सबै वर्गको पहुँच वृद्धि गर्न भोलिदेखि राजधानीमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ। नेपालमा प्रविधिमा न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूद्वारा आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनको उद्देश्य प्रविधिमा सबैको समान पहुँच गराउने वातावरण बनाउनु रहेको आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। शिखर सम्मेलनबाट प्रविधिको प्रयोग र गरिबि न्यूनिकरणमा त्यसले खेल्न सक्ने भूमिकाको बारेमा बहुमूल्य बिचार, अनुभव तथा चुनौतीबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ।
विशेषगरी चार क्षेत्र- कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा वायोटेक्नोलोजी, खानेपानी तथा सरसफाइ, प्रकोप न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, यातायात तथा पूर्वाधार विकास र प्राविधिक शिक्षा तथा सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यी चार क्षेत्रमा समानान्तर चल्ने सत्रमा विशेषज्ञहरूले कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नेछन्। सम्मेलनमा विभिन्न प्रकारका प्रविधिमा गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच बढाउन विभिन्न प्रकारमा गतिबिधिहरू सञ्चालन हुने र ‘प्रविधिमा न्याय’ विषयमा एक उपयोगी दस्तावेज तयार हुने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जनाएको छ।